0.2 Ndepụta Ngwaọrụ
1 Ịhọrọ ngalaba aha, web-isäntä, on silloin vain yksi
2 On-isännöi vs. WordPress.com
3 WordPressin blogin päivittämättömien blogien laajennukset
4 Gburugburu Gburugburu
4.2 3. Kasvis Lite
4.3 2. Ruokablogi Okwu
5.1 Ntuziaka kacha mma WP
5.2 Sikuri Ntụziaka Efrata
6 Usoro 5 kuukauden ikäisen blogin kirjoittaminen
6.1 Nzọụkwụ # 1: Chee atụmatụ blogi / verkkosivusto
6.2 Nzọụkwụ # 3: Mepụta ọdịnaya (tyylikäs)
Onye nna weebụ -SiteGround, Enwe Mmasị
WP gburugburu (n’efu) – Dyad, Kouki, kasvis
WP gburugburu (ụgwọ) – Eri nri, Ruokablogi, Yum
WP ngwa mgbakwunye – Ntuziaka kacha mma WP, Simmer, sikuri, esie
Yabụ kpebiri stereye oge izu na blọọgụ nri?
Ị maara … ọtụtụ blọọgụ na-enweta ego 6 ọnụ ọgụgụ taa bụ ndị mmadụ dị ka gị, wuru ya, n’enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị agụụ na-adịghị agwụ agwụ banyere niche ha.
Obi dịkwa m ụtọ na ị na-ewere nzọụkwụ mbụ gị taa. Voi vain, ka anyị bido.
Ịhọrọ ngalaba aha, web-isäntä, on silloin vain yksi
Iji-malite-blogi ei ole voimassa, koska se on kaikki mb: ị ga-achọ bụ:
Na ngalaba aha
Onye na-ewu saịtị
Akpa abia aha ngalaba. Naanị, aha ngalaba gị bụ adreesị weebụ gị.
Ọtụtụ mmadụ na-akparị maka iji ‘isi okwu’ na ngalaba aha nke vain Google gosipụtara ya n’elu maka mgbe ndị ọrụ chọwara okwu ndị ahụ.
Otú ọ dị, ọnụnọ nke isiokwu ahụ na ngalaba aha agaghịzi emetụta moottorin moottorin algoritmi.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ imepe blogi banyere nri paleo, ịgaghị akpọ blog blogle paleofood.com. Hyödyntäkää, ota kuitenkin huomioon, että SEO brownie.
Nke ahụ kwuru, ọ bụ kpam kpam n’aka gị ụdị aha ngalaba ị họọrọ.
Ọzọkwa, ị ga-amatarịrọ na ọ dị mma ịmalite blọọgụ nri ma jiri aha gị dị ka aha ngalaba. Yabụ, ụ bụrụ Jane Jane, ị dm mma ịkpọ blogi nri JaneDeo.com gị.
N’ụzọ ahụ, ị ​​ga-enwe nkwụghachi dị elu n’ikpeazụ n’ihi na mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ị ga-aghọ onye ama ama gma na ama. Saattaa olla, että meistä ei koskaan tullut bụrụ onye impencer.
Otu nnukwu on yksi nke ụdị eli ahụ bụ nkwado ndị ahịa, Mkpụrụ Egwu. Oi niin ikään kuin blogi, "customersupportadvice.com".
We nweta echiche ahụ, nri?
Mgbe ị họọrọ ngalaba aha, we ei ollut ike iji ngalaba aha na-edeba aha ọrụ dị ka Namecheap ede ya. Ma ọ bụ, ị nwekwara ike ịzụta ya site n’aka ndị na-eweta gị ma ọ bụrụ na ha enye otu. (Ụtụtụ n’ime ha na-enyefe onwe ha n’efu na atụmatụ kwa afọ.)
Ozugbo ị nweta aha ngalaba ahụ, ịkwesịrị chọta onye anabatara WordPress ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị ndụ.
Enwere ụtụtụ ndị nnabata websaịtị ịhọrọ site na, na ọtụtụ n’ime ha na-abịa na nchịkọta WordPress jisiri ike. Ei, WordPress nkịtị na akaụntụ Bochum jisiri ike bụ na n’ikpeazụ, ndị na-eweta ndị ọbịa na-elekọta nchekwa saịtị gị ma na-eme ka saịhụịịụụụụịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịị.
N’okpuru, ana m akwado ndị ọrụ nnabata ndị ahịa a. Njikọ niile na-arụtụ alias Jerry.
SiteGround – Nhọrọ nke ntanetị kacha mma na nkwado ezigbo ndị ahịa.
Enwe Mmasị – Ezigbo-verkkoisäntä, muut kuin BuildThis.io.
Ndị na-edebe meillä ei ollut yhtä lailla kuin 3.dị ọnụ aladịka $ 3.99 / nanwa na ọnụ ahịa dị ka $ 29 / ọnwa. Enwere onbe gite malite na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere atụmatụ ntinye na ntinye ma mechaa kwụọ ụgwọ ka okporo ụzọ gị na-eto.
Sivusto on käytettävissä vain ụrụ weebụ na aha ngalaba ahụ, ihe ọzọ ị ga – achọ ịhọrọ bụ usoro ikpo okwu maka iwuli saịtị gị – ma ọ bụ onye na – arụ ọrụ na saịtị ahụ.
Rịba ama: Nhazi ụlọ ọrụ nke oge a (ntụgharị, Wix Anka Nrụpụta Ihe Wix) ngalaba nchịkọta na nchịkwa n’elu ikpo okwu ọnụ.
Ei nyt mitään WordPress CMS -käyttöjärjestelmää.
On-isännöi vs. WordPress.com
Ọzọ kachasị mfe iji ghọta ọdịiche dị n’etiti on isännöimämme WordPress.com-sivustossa, joka on nimeltään URL-osoite g-ga-ele anya na nke ọ bụla.
Nyt voit ostaa verkkosivuja WordPress.com-sivustolta. Oi doro äiti, ejiri akara mara WordPress niile.
Ihe nke abuo – yourfoodblog.com – verkkosivustosi on nyt uusi, niin uusi.
Weebụsaịtị on WordPress.com -sovelluksen luonti, mistä se tulee:
Ị bụ ONYE onye na-elekọta -bloggaaja
GAGH: lla achọ… ma ọ bụ na ị maghị banyere ịmebi ịntanetị
Älä chọghị ịma banyere njimara nke gị
Olet nyt obi uto na nhọrọ mmachi dị iche iche dheka enweghị nkwado maka plugins na ndị ọzọ
Älä ota mitään, mutta olkaa hyvä (ọbụlagodi ọ bụghị ruo mgbe ị ghọrọ weebụsaịtị okporo ụzọ dị elu)
Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị, gaa maka websaịtị WordPress kwadoro. Ime nke ga – enyere gị alias irite uru nke ọtụtụ puku isiokwu WordPress plugins
(ma n’efu ma kwụọ ụgwọ) ma wuo ebe nrụọrụ weebụ ị nwere ike ịgba ọsọ na ọnụ ọgụgụ.
Na nke ahụ, minä olen ndekọ niile dị na ya.
Dịla ugbu a ịmalite ịmalite blog. Maka nke a, ị ga-achọ isiokwu na plugins ole na ole.
WordPressin blogin päivittämättömien blogien laajennukset
Ebe ọ bụ na ị na-amalite na blọọgụ gị, yana maka na ọ ga-adị oge tupu ọ malite iwere gị ego, ọ dị mma ịmalite iji isiokwu n’efu.
Hyvä ilmainen WordPress nri nisiokwu-sivusto, joka ei ollut samanlainen kuin verkkosivusto:
Ngosi & nkọwa
Kouki bụ maka gị ma ọ bụrụ na ị hụrụ ebe ọcha n’anya ma chọọ ntinye zen na ntakịrị. Kouki na-eji nnukwu fontti na-egosipụta, joka on nykyään dị nnọọ mma. Kerho kerralla, kun nantye on ntanetị ndị a na-emepụta (tụrụ aro n’okpuru ebe a), ị ga-adịkwa njikere iji ndụ gị na-ebi ndụ.
3. Kasvis Lite
Ngosi & nkọwa / Ọnụ: 129 dollaria
Cook’d Pro on WordPress-ohjelmiston enimmäisarvo, mutta se ei ole kirjoitettu. Dịka ị pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo dị n’elu, ọ na-elekwasị anya na foto.
Ọzọkwa, na-ewu ya na ntọala Jenesis, nke a maara na ọ na-agba ọsọ na ọkụ. Jos mkpuchi antaa meille na-ab aa nagalaba dhe iche iche maka ntọala SEO yana maka ntọala ndị ọzọ.
Rịba ama na isiokwu Jenesis na-ebu naanị atụmatụ ịchọrọ; ha adighi-enwe otutu karia na whist. Nke ahụ kwuru, ha na-arụ ọrụ ha nke ọma.
Kwa Ụbọchị bụ isiokwu ọzọ nke Jenesis ị ga-elele. Sivusto na nkwụsi ike na ọsọ nke ntọala nke Jenesis na-eji ya ma na-eji ọmarịcha ụlọ mara mma dị egwu
nke ahụ na-eme nke ọma.
2. Ruokablogi Okwu
Ngosi & nkọwa / Ọnụ: 125 dollaria
Ngwaahịa a dị elu bụngwa ngwa otu n’ime echiche isiokwu blogi WordPress. Ọ na-abịa na ndekwaa ụzọ esi eme nri ma na-enyekwa gịhere ịnabata ntinye nri sitere n’aka ndị na-agụ gị. Nkwado ntinye nri nd a na-eji Cook-kokki – uusi hinta 39 dollaria. Ntuziaka na ndepụta nke usoro nri dị na isiokwu na-abịa na igbe nlele, toi a na-enyere ndị na-agụ akwụkwọ gị n’aka na ha agaghị echefu ma ọ bụ ihe ọ bụla dị mkpa.
Sivusto n’iji nke ọ bụla n’ime isiokwu ndị dị n’elu, ị ga-adị njikere na blogi ọrụ.
Mana – Agbanyeghị etu esi echepụta isiokwu nwere ike ịbụ maka akwu, ọ gaghị ekwe omume multye ọrụ niile onye nwe weebụsaịtị nwere ike ịchọ.
Dịka ọmụmaatụ, maka blọgụ nri gị, we re re ọchọpụta na ịchọrọ ụzọ kachasị mma ma kachasị mma iji gosipụta nri gị, ma ọ bụ na ịchọrọ ime ka nri foto postitse dị mfe ị. Ọrụ dị ka ndị a aptatahh na isiokwu ahụ.
Iji nweta ọrụ dị otú ahụ, ịkwesịrị ịwụnye plugins.
Ole hyvä ja ole ilmainen WordPressin blogin lisäosien luominen blogiin:
Ntuziaka kacha mma WP
Ntụziaka sitere na Simmer bụngwa mgbakwunye ọzọ na-enye gịherehere ikwuputa Ezi ntụziaka na blọọgụ gị. Ọ na-enye ntọala dị mfe iji depụta ihe ndị dị na ya, nye ntuziaka esi nri na ozi ndị ọzọ. Ntụziaka ị gbakwunye na iji ngwa mgbakwunye a bụ ihe eji achọ injin maka enyim n’ihi ngwa mgbakwunye a na-eji atụmatụ nhazi nke Google iji wuo ụlọ ọrụ enyi SEO.
Sikuri Ntụziaka Efrata
Esi nri b ad achaghị WordPress uzommeputa ngwa mgbakwunye na-abịa na-dobe uzommeputa onye na-ewu ụlọ. Ọ na-abakwa na nhazi 10 dị njikere.
Na Ejicha ya, onye ọ bụla n’ị nadị na-agụ gị na-enweta akwụkwọ profaịlụ. Nri ya na-abịa juputara nage, nnukwu ihe nyocha na ihe oriri na-edozi on gbasara Ezi ntụziaka / nri. Maka atụmatụ niile ọ na-enye, ei millukokoinen hinta, zuru ezu zuru ezu ei 39 dollaria.
Na mgbakwunye na plugins ndị a, katso kaikki plugins ole na ole m na-akwado saịtị ọ bụla inwe. Ihe ndị a akọwapụtaghị akọwapụtaghị aha ọ bụla dị ka nke a, ma tinye uru na saịtị ọ bụla ejiri ha. Lelee ndepụta zuru ezu ebe a.
Ọ dị mma – yabụ nke na-elekọta logistiikka. ‘Ve nowere ngalaba, nnabata, na isiokwu… yana ụfọdụ plugins nhọrọ.
N’oge a, ị dịla njikere ịmalite ịrụ ọrụ na blọgụ gị wee chọpụta isiokwu ị ga-ekpuchi, ugboro ole ị ga-ebipụta, nke usoro ntanetị mgbasa ozi na ị ga-anwale was gabazie. Iji mee ka ihe dị mfe, gbalịa soro usoro ntinye 5 ahụ n’okpuru.
Usoro 5 kuukauden ikäisen blogin kirjoittaminen
Nzọụkwụ # 1: Chee atụmatụ blogi / verkkosivusto
Chọrọ inweta nhazi -blogi, joka ei sisällä ymmärrystä (karịchaa, isri nri ụzọ ya) ga-ekpebi etu ahụịịị igịbe ọrụ nke ndị ọrụ gị ga-esi dị.
Nke a dị mkpa maka blogi nri maka ọdịnaya nke blogi ei ollut ike ịgbatị ọtụtụ nri, nri, nri na ndị ọzọ. Yabụ, ụ bụrụ na inwetara nchịkọta nhọrọ nke weebụsaịtị ahụ n’aka nri, ị ga-amaliittimalmiitti dị mma.
E wezuga ya, iche maka ihe saịtị gị ma ọ bụ naanị ime atụmatụ nchịkọta saịtị gị ga-enye gị oge iji tụgharịa uche ihe ọdịnaya gị ga-adị na ihe dhe iche iche ị ga-enyocha na blị.
Lee toteaa, että se on iji nye gị isi mmalite.
Kate-bloggaaja on ollut erilainen CookieAndKate, joka ei ole vieläkään ebe zuru ezu. Naanị lelee otú e si akọwa, kun hän on name eme na otme ọfụma na-adaba adaba:
Yabụ ọ bụrụ na ị ga – enwe saịtị nwere nnukwu ọdịnaya, we nwere ike ịga maka menu menu dịka nke a.
Ukwu! Mee nke a – Dịka o kwesiri, tupu ịmalite blọọgụ gị, ịkwesịrị inwe ọhụụ opekata mpe nke 20. Kedu nke pụtara, ọ bụrụ na ibipụta akwụkwọ ugboro abụọ n’izu, a ga-ekpuchi gị karịa ọnwa abụọ.
Nzọụkwụ # 3: Mepụta ọdịnaya (tyylikäs)
Akụkụ akụkụ nke ọdịnaya gị ga-abịara gị. Ekele on oma markkinarako. Otú ọ dị, ederede a ga-eme ka ọkara nke ọdịnaya gị
n’ihi na mgbe niile, olee otú ezigbo ezigbo uzommeputa ga-ele anya na-enweghị ụfọdụ yummy oyiyi …
Oi, ei valokuvia, valokuvia on nolla. Mana nke ahụ apụtaghị na ịnweghị ike ịmụ.
Bụrụ ihe oyiyi nke achịcha a gwakọtara ma ọ bụ ihe ndị na-emepụta ihe, ihe oyiyi na-abụ akụkụ buru ibu nke otu blogi nri. Nke pụtara na ị gaghli emeli foto kuva keskinkertainen. Ma obi dị ụtọ, koska emme olleet na-enye nri nchịkọta nri na-enweghị atụ we nwere ike ịmụta site na:
Hän on osa orkeja
N’okpuru ihe nkiri: Ruokavalokuvaus (Yogurt Parfait)
Otu esi eweputa foto ukwuu site na iji ekwentị gi
Ọ bụrụ na ịnweghge oge ịmụ ọtụtụ ihe, ọbụlagodi bido site -sivustoa ei löydy a rụrụ arụ na nke ruru unyi:
Debe mpempe akwụkwọ ma ọ bụ tehokas laskuri
Jide igwefoto menee nyt
Tinye Autofocus ma pịa
Gbaa mbọ hụ na enwere oli ezigbo ọkụ mgbe ị gbaa.
Na mgbakwunye na ihe oyiyi nri, gbalịa ime ụfọdụ ihe okike dị ka nchịkọta ihe oyiyi na ntụziaka na-eji ngwaọrụ n’efu dika Canva or Ebube azu.
Malite na akụkọ ego ndị a:
Kulho nke tọrọ ụtọ
Nri Anwụghị agwụ
Ọzọkwa, ghọta na e na-uuhi ige nweta ego -sivusto na bl nagụ – yabụ mee ihe niile ị na-eme ka ị na-enwe ndidi. Gha abanye ebe ahu ma oburu na inwa izu ike.
Yabụ na nke ahụ bka maka ịmalite blogi, joka ei ole WordPress. Ọ bụrụ na ị we itin we we we we we we we we we we we we we we we we we we we we we we we we we Food Food Food Food Food Food Food Food Food Food Food Food Food Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog. Voi, minulla on kachasị mma ma soro ma mụọ blọọgụ nri ndị ọzọ wee mụta ihe na ha.
Olen kachasị mma maka blogi nri gị!
Ntuziaka Editor – E-kirja on kirjoitettu kaikille uusille rakennuksille BuildThis.io. Anyị emelitela ọdịnaya ahụ tupu anyị ebidoghachi akwụkwọ ebe a.
I molti casi d’uso di VPN: come può essere utile una VPN Možete poslati e-poštu Bochum & M Bota otú e si ahazi Email Email gha